Semalt बाट SSL प्रमाणपत्र
एउटा SSL प्रमाणपत्र के हो?
एक SSL प्रमाणपत्र को लागी के छ?
SSL सर्टिफिकेटका प्रकारहरू
एसएसएल प्रमाणपत्र का वर्गीकरण
वेबसाइट कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ?
HTTPS र SEO। के त्यहाँ कुनै सम्बन्ध छ?
SEMALT बाट SSL सर्टिफिकेट। के यो बिभिन्न हो?
वेबसाइटको अन्वेषण गर्नु सँधै सजिलो काम भएको छ, तर तपाइँको जानकारी सुरक्षित राख्नुहुन्न। कोहीले व्यक्तिगत डेटा चोर्न सक्दछन् विश्व भर मा एक साझा चिन्ता।
इन्टरनेट सर्फिंग अझै १००% सुरक्षित छैन, तर चोरीको डरलाई बिगार्ने एउटा कुरा भनेको हो SSL प्रमाणपत्र
आज वेब ब्राउजरहरूले पनि SSL प्रमाणपत्र नभएको साइटहरूको लागि सुरक्षा सतर्कताहरू देखाउँदछ। त्यस्ता चेतावनीले अधिकांश प्रयोगकर्ताहरूलाई अगाडि बढ्नबाट रोक्छ।
यसको प्रयोगकर्ताहरूसँगै व्यवसाय/वेबसाइट मालिकहरूको लागि बिभिन्न अर्थहरू छन्। प्रयोगकर्ताको दृष्टिकोणबाट, त्यस्ता सतर्कताहरू राम्रो देखिन्छन्। उनीहरूले महसुस गर्छन् कि चेतावनीले भाइरसको आक्रमणलाई तिनीहरूको उपकरणमा वा उनीहरूको जानकारी चोरी गर्नबाट रोकेको छ।
एक SSL प्रमाणपत्र बिना एक व्यवसाय वेबसाइट यसको अनलाइन उपस्थिति मार्न पर्याप्त छ। ब्राउजरहरु को चेतावनी को कारण, अधिक उपयोगकर्ताहरु को पनि कि व्यापार को वेबसाइट खोल्न छैन।
आज, तपाईं SSL प्रमाणपत्रको बारेमा मात्र धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुनेछ तर पनि भरपर्दो स्रोतहरूबाट किन SSL प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दै, जस्तै Semalt, ठिक छ।
SSL प्रमाणपत्र के हो?
SSL प्रमाणपत्रमा, SSL सुरक्षित सॉकेट लेयरको अर्थ हो। यो एक डिजिटल प्रमाणपत्र हो जुन वेबसाइटहरूलाई प्रमाणित गर्दछ र डाटा अखण्डताका साथै डाटा ईन्क्रिप्शन अनुमति दिन्छ।
यो संवेदनशील जानकारीको सुरक्षाको लागि प्रयोग गरीन्छ जस्तै प्रयोगकर्ता नामहरू, पासवर्डहरू, क्रेडिट कार्डहरूको विवरणहरू, र अन्य त्यस्तै डाटा जुन इन्टरनेटको वरिपरि पठाइएको र प्राप्त गरिएको छ।
तपाईं ठेगाना पट्टीमा हेरेर SSL प्रमाणपत्रका साथ वेबसाइट पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं नियमित एक (HTTP) को सट्टा एक सुरक्षित हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल (HTTPS) देख्नुहुनेछ।
SSL सर्टिफिकेटका बारे सिक्दै तपाईं प्रायः TLS प्रमाणपत्र शब्द प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हेरौं यो के हो।
TLS (यातायात तह सुरक्षा) SSL को उत्तराधिकारी प्रोटोकल हो। यो SSL जस्तै कार्य गर्दछ तर सुधारिएको मार्गमा।
यसले इन्टरनेटमा सूचना र डाटा स्थानान्तरणको रक्षा गर्न पनि ईन्क्रिप्शन प्रदान गर्दछ। SSL जस्तै, वेबसाइटहरू वा TLS द्वारा सुरक्षित वेबपृष्ठहरूको URLs पनि HTTPS संग ब्रान्ड गरिएको छ।
SSL प्रमाणपत्रको आवश्यकता के हो?
वेबसाइट र व्यक्तिगत उपकरणहरू इन्टरनेट मार्फत जडान हुँदा त्यहाँ सधैं सुरक्षा जोखिमहरू हुन्छन्। एक SSL प्रमाणपत्रले वेबसाइट र उपकरणहरू बीचको जडान सुरक्षित छ र कुनै जानकारी चोरी भएको छैन भनेर निश्चित गर्दछ।
सुरक्षा प्रमाणपत्रले एक वेबसाइटलाई विश्वासनीय पनि बनाउँदछ र प्रयोगकर्ताहरूलाई स्क्यामरको पासोमा पर्नबाट जोगाउँदछ।
तल केहि धेरै प्रकारका जानकारीहरू छन् जुन SSL प्रमाणपत्र सुरक्षित छन्:
प्रयोगकर्तानाम र पासवर्डहरू
क्रेडिट कार्ड विवरणहरू साथै लेनदेनहरू
व्यक्तिगत जानकारी - पूरा नाम, जन्म मिति, ठेगाना, वा सम्पर्क नम्बर
सम्झौताहरू र अन्य कानूनी कागजातहरू
SSL प्रमाणपत्रका प्रकारहरू
सुरक्षा अखण्डतामा निर्भर गर्दै, SSL प्रकारका तीन प्रकारका अवस्थित छन्। यदि तपाईंसँग एक वेबसाइट छ र SSL प्रमाणपत्र खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले प्रमाणपत्रहरूको यी तीन प्रकारहरू बुझ्नु पर्छ।
यसले तपाईंलाई कुन प्रकारको प्रमाणपत्रले तपाईंको आवश्यकताहरू पूर्ति गर्दछ निर्णय गर्न मद्दत गर्दछ। तिनीहरूलाई हेरौं:
१. डोमेन मान्यकरण (डीभी)
यी सरल SSL प्रमाणपत्रहरू हुन् र वेबसाइटको मालिक प्रमाणित गरेपछि जारी गरिन्छ। मालिकको पहिचान प्रमाणित गर्न, प्रमाणपत्र प्राधिकारी (CA) वेबसाइटको पंजीकृत ईमेलमा एक प्रमाणिकरण ईमेल पठाउनुहोस्।
त्यहाँ कम्पनीको पहिचान प्रमाणित गर्न आवश्यक छैन डोमेन प्रमाणित प्रमाणपत्रहरू। तपाईंले नोट गर्नु पर्दछ कि यी सजिलै प्राप्त गर्न सकिने प्रमाणपत्रहरूले सुरक्षाको न्यूनतम स्तर प्रदान गर्दछ। त्यसकारण साइबर क्राइमले तिनीहरूलाई असुरक्षित वेबसाइटहरू सिर्जना गर्न अधिक प्रयोग गर्दछन् जुन सुरक्षित देखिन्छ।
२. संगठन मान्यकरण (OV)
यी प्रमाणपत्रहरूले सुरक्षाको एक मध्यम स्तर प्रदान गर्दछ। संगठन प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र मात्र जारी हुन्छ जब प्रमाणपत्र प्राधिकरणहरू (CA) संगठन, यस वेबसाइटको डोमेन नाम, भौतिक स्थान, र अन्य समान चीजहरू जस्ता जानकारी मान्य गर्दछ।
यी प्रमाणपत्रहरू कम संवेदनशील लेनदेनको कारोबार गर्ने वेबसाइटहरूको लागि उत्तम हो। याद गर्नुहोस्, OV प्रमाणपत्रहरूको प्रमाणीकरण प्रक्रियामा सामान्यतया १- 1-3 दिन लाग्छ।
Ex. विस्तारित मान्यकरण (EV)
एक विस्तारित प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र सुरक्षाको उच्च स्तर प्रदान गर्दछ र संवेदनशील जानकारी सम्हाल्ने वेबसाइटहरूको लागि अनिवार्य छ।
यस प्रमाणपत्रको साथ एक वेबसाइट सबैभन्दा विश्वसनीय मानीन्छ। यो प्रमाणपत्र जारी गर्नका लागि प्रमाणपत्र प्राधिकारी (CA) ले आवेदकको विस्तृत समीक्षा गर्छ।
समीक्षा गर्दा, अधिकारीहरूले कर्पोरेट कागजातहरू जाँच्दछन्, आवेदकको पहिचान पुष्टि गर्दछन् र यसको जानकारी एक निष्पक्ष स्रोत/डाटाबेस मार्फत प्रमाणित गर्दछ।
SSL प्रमाणपत्रहरूको वर्गीकरण
तिनीहरूको प्रयोगको आधारमा, SSL प्रमाणपत्रहरूलाई निम्न तीन प्रकारहरूमा वर्गीकृत गरिएको छ:
१ एकल डोमेन SSL प्रमाणपत्र
नामले सुझाव दिईएमा यस प्रकारको SSL प्रमाणपत्र एकल डोमेनमा लागू हुन्छ। यस प्रमाणपत्रले यस डोमेन अन्तर्गत आउने सबै पृष्ठहरू सुरक्षित गर्दछ, तर तपाईं यसलाई डोमेनको कुनै पनि सबडोमेन प्रमाणीकरण गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न।
२ वाइल्डकार्ड SSL प्रमाणपत्र
वाइल्डकार्ड एसएसएल प्रमाणपत्रले डोमेन मात्र नभएर सबै उप-डोमेनहरू यस भित्र आउँछ। यदि प्रयोगकर्ताहरू वाइल्डकार्ड एसएसएल प्रमाणपत्र द्वारा सुरक्षित सबडोमेनको बारेमा जान्न चाहान्छन् भने उनीहरू वेब ब्राउजरको ठेगाना बारमा प्याडलकमा क्लिक गर्न सक्दछन्। अर्को, ती विवरणहरू हेर्नको लागि "प्रमाणपत्र" (गुगल क्रोममा) क्लिक गर्नुपर्नेछ।
3 बहु-डोमेन SSL प्रमाणपत्र (MDC)
MDC एक SSL प्रमाणपत्र हो जुन बहु डोमेनलाई सुरक्षा प्रदान गर्दछ। उप-डोमेनहरू नभएको डोमेनले उही SSL प्रमाणपत्र साझा गर्न सक्दछ।
यदि तपाईंसँग बहुविध वेबसाइटहरू छन् र ती सबै सुरक्षित गर्न एकल प्रमाणपत्र चाहनुहुन्छ भने, बहु-डोमेन SSL प्रमाणपत्रको लागि जानुहोस्।
यदि तपाइँ अनुकूलित र समर्पित SSL प्रमाणपत्र चाहानुहुन्छ भने,aको साथ सम्पर्कमा रहनुहोस् विश्वसनीय प्रमाणपत्र प्रदाता।
वेबसाइट कसरी सुरक्षित छ भनेर कसरी पत्ता लगाउने?
वेबसाइट एसएसएल प्रमाणपत्र द्वारा सुरक्षित छ कि भनेर खोज्नको लागि, तपाईंले आफ्नो ब्राउजरमा ठेगाना बारलाई मात्र हेर्नु पर्छ। यदि त्यहाँ पहिलो चीज प्याडलॉक छ र साइटको ठेगानाबाट सुरू हुन्छ https, विश्राम निश्चित वेबसाइट एक SSL द्वारा सुरक्षित छ।
यदि तपाइँ एक कदम अगाडि जान चाहानुहुन्छ र वेबसाइटको मजबूत SSL प्रमाणपत्र छ वा छैन जान्न चाहानुहुन्छ भने, पुन: तपाइँको ब्राउजरको URL बारमा हेर्नुहोस्। यदि तपाइँ प्याडलक देख्नुहुन्छ भने, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले देख्नुहुनेछ कि यो प्रमाणपत्र कोसँग सम्बन्धित छ र अन्य जानकारी। थप विवरणहरू जान्न, सम्बन्धित फिल्डमा क्लिक गर्नुहोस्।
यो सामान्यतया ज्ञात छ कि गुगलको एसईओ र्याकिंग एल्गोरिदमहरू सधैं परिवर्तन हुन्छन्। डिसेम्बर १,, २०१ 2015 मा, Google ले HTTPS पृष्ठहरूलाई प्राथमिकता दिन शुरू गर्यो।
वेबसाइटहरूमा SSL प्रमाणपत्रको उपलब्धता HTTPS को साथ सुरू हुन्छ। यसले संकेत गर्दछ कि वेबसाइट विश्वसनीय छ र एक एसईओ लिफ्ट प्राप्त गर्दछ।
मानौं कि त्यहाँ दुई वेबसाइटहरु छन् (एउटा HTTP को साथ सुरू, र अर्को HTTPS संग) र तिनीहरूको सामग्री उस्तै कुराको बारे मा छ, भन्न गरौं पर्यावरण अनुकूल उत्पादनहरु।
यदि तपाइँ अरू सबै र ranking्कि factors कारकहरू स्थिर राख्नुहुन्छ भने, तब वेबसाइट HTTPS को साथ सुरू हुन्छ, वा राम्रो SSL को प्रमाणपत्र छ भन्नुहोस्, गुगलको खोज परिणाम पृष्ठमा उच्च श्रेणी हुनेछ।
वेबमास्टर्सले SSL प्रमाणपत्रहरूको सहि कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ किनकि यसले खोजी ईन्जिनहरूमा आगन्तुकहरूको बृद्धि स enhan्ख्या र वर्धित र्याकिंग निम्त्याउँदछ।
Semalt बाट SSL प्रमाणपत्र। के यो फरक छ?
Semalt बाट SSL प्रमाणपत्र अन्य स्रोतहरु द्वारा प्रस्ताव को जस्तै छ। फरक Semalt द्वारा प्रदान गरिएको सेवाको प्रकार र स्थापनाको सहजतामा हो।
Semalt तीन प्रकारको योजना प्रदान गर्दछ:
आधारभूत योजना समयको लागि हो जब तपाईंसँग पहिले नै SSL प्रमाणपत्र छ, तर यो तपाईंको साइटमा स्थापित छैन। यो योजनाले SSL स्थापनाका साथै HTTPS समर्थन प्रदान गर्दछ।
सबै भन्दा राम्रो सम्झौताको रूपमा प्रसिद्ध, मानक योजना सबैभन्दा मूल्य प्रदान गर्दछ। किनभने यो योजनाले स्थापनाको साथमा Comodo बाट सकारात्मक SSL प्रमाणपत्र सामेल गर्दछ।
कोमोडोको सकारात्मक SSL प्रमाणपत्रले उच्च स्तरको सुरक्षा प्रदान गर्दछ। तिनीहरू कागजी रहित प्रमाणीकरण प्रक्रिया अनुसरण गर्छन्, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा Semalt बाट तिनीहरूको स्थापना हो। तपाईंको साइट एक प्याडलॉक हुन्छ र केहि मिनेटमा अत्यधिक सुरक्षित हुन्छ।
यो योजनाले उच्च स्तरको सुरक्षा पनि सुनिश्चित गर्दछ। यसले तपाईंको वेबसाइट, यसको सबडोमेन, र सबैको लागि स्थापनाको लागि एक सकारात्मक एसएसएल वाईल्डकार्ड प्रमाणपत्र समावेश गर्दछ।
यदि तपाईं ई-कॉमर्स स्टोर चलाइरहनु भएको छ वा तपाईंको साइटमा बहु सबडोमेनहरू छन् भने, Semalt बाट प्रीमियम योजनाको लागि जानुहोस्।
Semalt बाट प्रत्येक SSL प्रमाणपत्रको स्थापनाको साथ, तपाईं प्राप्त गर्नुहुनेछ:
तपाईंको डोमेन र सबडोमेनको लागि मजबूत सुरक्षा (प्रीमियम योजनाको मामलामा)
SSL प्रमाणपत्रको द्रुत स्थापना
प्याडलक वा सबै वेब ब्राउजरहरूमा सुरक्षाको समान चिन्ह
तपाइँको वेबसाइट भ्रमण गर्ने सबै व्यक्तिहरूको गोपनीयता सुरक्षा जमानती
बढेको जैविक यातायात, विशेष गरी Google SERPs बाट (खोज इञ्जिन नतीजा पृष्ठहरू)
अनलाइन संसारमा, जानकारी चोरी विरुद्ध संरक्षण सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो। एक SSL प्रमाणपत्र दुबै वेबसाइट मालिकहरु र प्रयोगकर्ताहरु/आगन्तुकहरु को सुरक्षा सम्बन्धित धेरै चिन्ताहरु फीका।
तपाईंको वेबसाइट ई-वाणिज्य स्टोर, वित्तीय संस्था, वा ठूलो उद्यम प्रतिनिधित्व गर्दछ कि, एक SSL प्रमाणपत्र एक हुनै पर्छ।
यसले तपाईंको साइटलाई विश्वसनीय बनाउँदछ र सुरक्षा प्रदान गर्दछ यदि तपाईंको साइटले संवेदनशील ग्राहक जानकारी, जस्तै प्रयोगकर्तानामहरू, पासवर्डहरू, भुक्तानी विवरणहरू, ठेगानाहरू, आदिसँग डिल गर्छ।
गुगलले पनि एक सुरक्षित वेबसाइट वा वेबपृष्ठमा प्राथमिकता दिन्छ, एक विश्वसनीय स्रोत बाट SSL प्रमाणपत्र तपाइँको वेबसाइट को धेरै आवश्यक SEO रैंकिंग सुधार गर्न सक्दछ।